အကြွေးဝယ်ကတ်များနှင့်ချေးငွေများကိုလေ့လာပါ | USAHello | USAHello
သငျသညျပိုက်ဆံချေးဖို့လိုအပ်ပါသလား? ပိုက်ဆံချေးဖို့ချေးငွေနှင့်အကြွေးဝယ်နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံး. ငွေချေး၏အချို့အမျိုးအစားများကိုအခြားသူများထက်ပိုမိုလုံခြုံများမှာ. အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုလေ့လာပါနှင့်နေ့ရက်ကိုချေးငွေနှင့်ပိုက်ဆံချေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေပေးဆောင်.
Hailuot / Wikimedia Commons ဓာတ်ပုံယဉျကြေး
သငျသညျငွေသားသုံးမယ့်အစားအရာများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဆိုင်ထဲမှာဆပ်ဖို့, သင်စက်အတွက်သေးငယ်တဲ့ပလပ်စတစ်ကဒ်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်. ဖုန်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းကျော်, သင်ကတ်နံပါတ်နှင့်စကားဝှက်သို့မဟုတ် Ntgahma ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်.
Easy-To-အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေမှုအကြွေးကတ်များ. ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာအန္တရာယ်များ. သငျသညျလတိုင်းသင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ပေးဆောင်ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျအတိုးပေးဆပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်စိတ်ဝင်စားချေးပမာဏကိုကျော်သင်ပေးဆောင်ပမာဏဖြစ်ပါသည်. အားဖြင့်အကြွေးကို non-ငွေပေးချေမှု, တိုးမြှင့်အကျိုးစီးပွားများ၏ကြာချိန်ကြာကြာ. အမေရိကရှိလူများ၏အဖြေတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြွေးကဒ်များကြီးမားတဲ့ကြွေးမြီများ.
သငျသညျကွောငျ့, ကြွေးမြီစရတဲ့၏အန္တရာယ်ကိုတစ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုချင်တယ်မပြုစေခြင်းငှါ. ဒါပေမယ့်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်: သင့်ရဲ့အကြွေးသမိုင်းကိုစတင်ရန်. သင့်ရဲ့အကြွေးစံချိန်ကချေးသောအရာကိုသင့်ရဲ့စံချိန်သည်နှင့်မည်ကဲ့သို့နောက်တဖန် paid. ဒါဟာကောင်းသောအကြွေးအဆောက်အဦးအတွက်ခရက်ဒစ်သမိုင်းကူညီပေးသည်. သင်တစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာတည်ဆောက် အကယ်. ကြီးမားသောအမှုအရာကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာ, သင်ကားသို့မဟုတ်အိမ်တအိမ်ဝယ်ယူလိုပဲပိုက်ဆံချေးနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာစတင်နိုင်ပါသည်. တိုးတက်ခြင်း ခြေတံရှည်ခရက်ဒစ်ကတ်များရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ချေးငွေတည်ဆောက်ရန်ရုန်းကန်နေကြသူအခြားလူမှအာမခံထားပါသည်. အဆိုပါလုံခြုံအကြွေးကဒ်များကိုသင်ပြီးသားသူ့ကိုပိုက်ဆံပေးစခွေငျးငှါဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အကြွေးမဟုတျပါ, သို့မဟုတ်သင်ပေးဆောင်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုဂတိထားသော. ဒါပေမယ့်သင်ကအကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာတည်ဆောက်ခွင့်ပြု. ဘဏ်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်ကိုလည်းခရက်ဒစ်ကတ်များတယ်ပါပြီ. ခြေတံရှည်အနိမ့်အတိုးနှုန်းရှိပြီးကုမ္ပဏီများသည်၏အခြားစျေးနှုန်းများထက်လျှောက်ထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူ. ဒီတော့အကြွေးသမဂ္ဂများပြုပါ.
အဆိုပါအကြွေးပြည်ထောင်စု join ဖို့
credit သမဂ္ဂများဘဏ်များကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူအောင်မြင်ဖို့ကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. အားလုံးအကောင့်အသစ်များ၏ပိုင်ရှင်တွေအတူတကွအကြွေးပြည်ထောင်စုရှိ. ဒါဟာပိုက်ဆံချေးသို့မဟုတ်လုံးဝမအကြွေးသမိုင်းရှိသည်သောဝင်ငွေနည်းပြည်သူများနှင့်လူမျိုးကိုအကြွေးဝယ်ကတ်များကိုပေးခြင်းဖြင့်အကြွေးသမဂ္ဂများကူညီပေးသည်. ဒါဟာသင်သိပ်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီကြမည်. သငျသညျအနီးခရက်ဒစ်ပြည်ထောင်စုကိုရှာပါ
သငျသညျရနိုင်ကြောင်းချေးငွေအမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ်. ရေတိုရေရှည်အရေးပေါ်အတွက်သူတို့ထဲကတချို့က, အခြားသူများထိုကဲ့သို့သောအိမ်တအိမ်ဝယ်ယူအဖြစ်ရေရှည်အခြေအနေများတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်နေစဉ်.
Payday ချေးငွေများပိုက်ဆံအစာရှောင်လိုအပျသူလူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏. ပြည်သူ့သင်ပေးဆောင်ခံယူသောနေ့၌ကပေးဆောင်ဖို့ငွေစုငွေချေးထံမှပိုက်ဆံချေး. သို့သော် payday ချေးငွေများကိုမကြာခဏနှင့်အတူစတင်ထက်ပိုမိုလေးနက်သောဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ. တစ်ဦး payday ချေးငွေ Get သင်သည်အဘယ်သို့ရှိသည်အောက်ပါလစာတက်စစျဆေးဖို့လျော့နည်းပိုက်ဆံကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်. ဒါ့အပြင်ငွေချေး payday အာရုံကိုအများကြီးအားသွင်း. ဒါကြောင့်သင်ကချေးထက်အများကြီးပိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်. အချိန်ပေါ် paid မထားလျှင်, သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်.
Payday အခြားရွေးချယ်စရာချေးငွေများ (PAL)
ဒါဟာအကြွေးသမဂ္ဂများအရေးပေါ် payday ချေးငွေများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ: အခြားရွေးချယ်စရာ Payday ချေးငွေ (PAL). PAL တစ်ရေတိုရေရှည်ချေးငွေဖြစ်တယ်, ဒါသင်တစ်ဦး payday ချေးငွေရရှိရန်ရန်မလိုပါ. သငျသညျအထိချေးနိုင်ပါတယ် 1000 အမေရိကန်ဒေါ်လာအကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးစည်းကြပ်ဖို့လုပ်ပေးမည်မဟုတ်. သငျသညျအထွက် PAL နိုင်မီတစ်လများအတွက်အကြွေးပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရပါမည်.
ပေါင်ကလူတစ်ဦးနေအိမ်မဝယ်နိုင်သောချေးငွေများဖြစ်ကြောင်း. တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လတစ်ဦးကြီးတွေထပ်တိုးရှိပါတယ်. သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကငှားပေးဆောင်ထက်မပိုကြောင်း, အဆုံး၌, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်! ဒါဟာပေါင်ရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သို့သော်လည်းသင်တို့ပြည်ထောင်စုရဲ့အကြွေးသင်ကူညီစေခြင်းငှါ. ပေါင်အကြောင်းကို Read non-နိုင်ငံသားများ. ဖက်ဒရယ်အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အမျိုးမျိုးသောချေးငွေများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးနှင့်မည်သို့အသစ်ရဲ့အိမ်မှာအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့သငျသညျသငျပေးနိုငျ.
သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစတင်နိုင်ရန်အမေရိကန်, ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအနှံ့အများအပြားအစီအစဉ်များကိုကူညီပါ. ချေးငွေနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံ, အလုပ်ရုံ, ငွေကြေးအဖြစ်ထောက်ခံမှု၏အခြားပုံစံများပေး. ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့:
Sacramento ကယ်လီဖိုးနီးယား: တံခါးပေါက်ဖွင့်လှစ်
New Hampshire: နယူး Hamilton ကနယူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ချေးငွေများ
ဝါရှင်တန်ဒီစီ, Baltimore: စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလက်တင်အဘို့အရေးစင်တာ
အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ: ယင်းထဘဏ္ဍာရေးရေးစင်တာတွင်
ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (CDFIs) အကြွေးသမဂ္ဂများဆင်တူ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေအမြတ်အစွန်းရစေချင်ကြပါဘူး. အဲဒီအစား, သူတို့ကလူအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးလို. အစောပိုင်းချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများ, အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသစ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုက်ဆံချေးနှင့်အိမ်များသင့်လျော်သောစျေးနှုန်းများတည်ဆောက် သငျသညျအနီး CDFI ရှာဖွေပါ